Waa maxay taariikhda ka dambeeya 192.168.1.1?
Asal ahaan waxaa jiray 5 fasalada ee internet cinwaanka A, B, iyo C, oo waxay ahaayeen isticmaalka D guud kaas oo lagu beddeli waayo multicast qabashada iyo E sida loogu talogalay isticmaalka tijaabo ah. nidaamka fasalka waxa loo adeegsaday marka qoondaynta baxay cinwaanada IP in shirkad.
Class A, B, iyo C Cinwaanada
In kasta oo la qoro cinwaanada IPv4 in tobanle Qeexidda A, B, iyo C hadlaya dhab u aragto sida cinwaanka u muuqataa in binary. In this, cinwaanka ka wakiil yahay 4 kooxaha 8 gelinno. Sidoo kale, la soco IP in Cinwaanada waxaa dhab ahaan loo kala qaybiyey 2 qaybo ka mid. qayb A bandhigo network iyo qayb ka mid ah oo wakiil ka ah ciidanka.
On Cinwaanka IP caadiga ah sida loo isticmaalo on network guriga.
In Binary in uu yahay.
qayb Network | marti Part
192.168.1.waa qayb ka mid network oo ka mid ah cinwaanka iyo kan ugu dambeeya ee 1 waa qayb ka mid ciidanka.
waa maxay 192.168.1.1 IP Address?
192.168.1.1 cinwaanka IP waa albaab default ee ugu router wireless sida TP-Link ee, Cisco, Linksys, D-Link, Belkin, Asus, Netgear, iyo Billion router ama ADSL Moodeemka. Waxaa jira dhowr IP cinwaanada ugu weyn router qaadi karo,, 192.168.1.1 waa mid ka mid kuwa ugu badan in kastoo 10.0.0.1 ama 192.168.0.1Waxa kale oo jira fursado kale. Kuwan waxaa loo yaqaan cinwaanada ciidankii.
Sida cad mid ka mid maamuli kartaa Options Security, Maamulka Network, WAN (Network Area Wide), ADSL (Sinnayn Digital macmiilka Line), IP QoS, DNS (Domain Name System), WLAN (Wireless Area Network Local) goobaha, DSL (Digital macmiilka Line), wakiil, LAN (network degaanka maxalliga ah), MAC (Control Access Dhexdhexaad), block WPS kuwo kale.
Sida loo login 192.168.1.1 IP Address Step By Step Guide
STEP 1. First of dhan, waxaad geli kartaa https://192.168.1.1 aad browser ee cinwaanka bar.
STEP 2. Markaas Haddii aad hesho qalad, markaas https://192.168.1.1 ma aha cinwaanka IP aad router ee.
Sidaas saaxiibaday hoos waxaad eegi kartaa Default router IP Address List:
STEP 3. Markaas ka dib Gali default username roter iyo password in ay gasho si aad router.
STEP 4. Haddii aad illowday in aad magacaaga iyo isgarad-aad raaci karaan tilmaamaha hoos ku siiyo u soo.
Haddii aad wax ka beddeli mayso username default iyo password in la iman router ka dibna aad fadlan hubi kartaa Default router Username Password iyo List:
3la http://192.168.1.1 admin admin
STEP 5. Marka aad ku sugan tahay router ee admin guddi ka dibna aad awood u yeelan doonaan in la beddelo iyo wax ka beddelo oo dhan goobaha internet.
Maxaa la sameeyaa haddii aad u halmaanteen la username iyo password aad router ee
Hey Guys!! Haddii aad hore u beddelay iyo illoobo username router ama password, ka dibna si fudud aad dib kartaa router ee kale. By u resetting in goobaha ay keddibna warshad, Username default iyo password lagu dhisi doonaa. button The keddibna on router ugu waa mid aad u yar yar oo adag in la helo karo. Waxaad u baahan doontaa NIB qalin, pin, ama waxyaabo kale oo khafiif ah in ay hoos ku dhowaad 15 seconds.
SIDA LOO HELI Cisco router ISTICMAALKA 192.168.1.1
➥ First of dhan aad si aad u computer ku xidhi kartaa Cisco router la isticmaalayo cable RJ45.
➥ Markaas ka dib noqda on Cisco router iyo Computer.
➥ Next Open Browser iyo nooca https://192.168.1.1 iyo-saxaafadeed Ku qor.
➥ Haddaba geli username iyo password Default (admin admin) haddii aadan la beddelo. Ama Waxaad ku qortaa magacaaga iyo isgarad-.
➥ Waxaa furi doonaa Cisco router Admin Page.
➥ Hadda waxaad astaysto goobaha oo dhan iyo sidoo kale beddeli password WiFi.
➥ TP-LINK router uu leeyahay cinwaanka IP ah 192.168.1.1.
➥ Waxaad ku xidhi kartaa TP-Link router iyo Computer la cable RJ45 ah.
➥ Nooca Next https://192.168.1.1 in browser iyo Press gala.
➥ Ku qor magacaaga iyo isgarad-.
ciwaanka IP: ga: 192.168.1.1 (ama http://tplinkwifi.net)
password: admin / password
➥ Haddaba tag Meeshay wireless wuxuuna beddeli goobaha aad u baahan tahay.
➥ First of dhan xirmaan router D-Link aad computer la cable Ethernet.
➥ Markaas leexo on your computer.
➥ browser Web Haddaba Open. nooca http://192.168.1.1 ama http://router dlink iyo-saxaafadeed Ku qor.
➥ Log in si ku router D-Link la username maamulka iyo password.
➥ Haddii aad gasho markii ugu horeysay ka dibna waxaad riixi kartaa on Setup ka dibna in goobaha wireless tago.
➥ Markaas waa inaad gacanta ama si toos ah Mudanayaasha kartaan.
SIDA LOO Log in si A router NETGEAR
➥ First of dhan, aad ku xidhan karto router Netgear la your computer Windows
➥ Markaas Browser furan iyo nooca https://192.168.1.1 iyo Press gala.
➥ Haddaba gala Netgear router ee username iyo password default.
➥ Guys Haddii aadan aqoon default username-password ka dibna hubi our miiska kor ku xusan.
➥ Tag Wireless Settings iyo astaysto goobaha.
Waxaan qabaa in ay tahay in macluumaad ku filan oo ku saabsan noqon 192.168.1.1 Cinwaanka IP Default router Username & password. Waxaan rajeynayaa in dhammaan noocyada kala duwan ee macluumaad waxtar leh in aad laakiin haddii aad soo food saartay dhibaato kasta oo ku saabsan this post, fadlan faallo na waxaan isku dayi doonaa si ay u xaliyaan dhibaatadaada waayo, sida ugu dhakhsaha badan. Thanks for booqasho our site.
Linksys router Login & Linksys router-haggaajin Guide
Raadi router IP Address